Manome Feo sy Fanantenana ho an’ireo ‘Niharam-Boinan’ny Rivodoza Haiyan Nohadinoina’ ao Philippines · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2015 18:20 GMT
Tanàna amoron-dranomasin'i Estancia izay tratran'ny voina roa tao anatin'ny indray andro tamin'ny Novambra 2013: Ny rivodoza Haiyan sy ny solika niparitaka avy amin'ny moteran'ny botry iray. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'i Rep. Tonchi Tinio
Nisy andian'olona mpanolotena sy olom-pirenena tia mampita vaovao nandrakitra an-tahirinkevitra ny fanasitranana sy ny tolona ataon'ny mponina ambanivohitry ny tanànan'i Estancia, faritanin'i Iloilo, taorian'ny takaitra navelan'ny rivodoza Haiyan (fantatra ao an-toerana ho Yolanda) tao amin'ny faritra tamin'ny 2013.
Haiyan no rivodoza natanjaka indrindra voarakitra an-tantara sy nahafaty olona mihoatra ny 6000 tao Philippines, indrindra fa tao amin'ireo nosy Samar sy Leyte. Nahatratra ireo nosy hafa tahaka an'i Iloilo ihany koa Haiyan saingy tsy voalazan'ny gazety be mpamaky loatra ny nanjò ireo niharam- boina tany. Ny ankamaroan'ireo vondrona mpanao fanampiana sy ny fitondram-panjakana vahiny dia nifantoka tamin'i Leyte, izay ‘ground zero’ [ivon'ny fandalovan'i] Haiyan; raha zara fa nitodihana sy zara raha nahazo fanampiana taorian'ny takaitra navelan'ny rivodoza kosa ireo nosy hafa tahaka an'i Estancia.
Estancia, izay miorina avaratr'i Iloilo, dia foiben'ny varotra trondro. Rehefa nandravarava ny faritra i Haiyan tamin'ny 8 Novambra 2013, dia saiky nofafany avokoa ireo sambom-panjonoana rehetra tao Estancia. Noravany ihany koa ny sambo iray mpitondra angovo izay nanaparitaka fitehirizana solika mihoatra ny 800.000 litatra tany anaty rano. Tsy fantatry ny maro amin'ny Filipino fa voina roa — Haiyan sy ny fielezan'ny solika fandrehitra — no nahazo an'i Estancia tao anatin'ny indray andro.
Haiyan nandrava ireo tanàna kely manamoron-dranomasina ao Estancia. Sary avy amin'ny pejy Facebook Foiben'Olompirenena Mamaly ny Voina.
Tonga ny fanampiana avy amin'ny governemanta saingy loatra sady voaporofo ho kely loatra. Nandritra ny fotoam-piandrasana dia efa nifandamina ny mponina ary nanao fanentanana tamin'ny fanangonana sy fizarana fanampiana. Efa namaly tamin'ny alalan'ny fanangonana fanomezana sy endrika fanampiana hafa sy tamin'ny fanolorana azy mivantana tamin'ny mponin'i Estancia ny vondrom-piangonana, sekoly ary fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana avy ao Manila sy faritra hafa ao amin'ny firenena.
Herintaona taorian'ny voinan'i Haiyan, mbola maro ihany ny mitaraina tamin'ny tsy nahavitan'ny governemanta namerina tamin'ny laoniny ireo sekoly, toera-pitsaboana ary trano rava ao Estancia. Maro ihany koa ny mponina no tsy nahazo onitra tamin'ny fiparitahan'ny solika izay nandrava ny fiainana andavanandron'izy ireo.
Ny tolona ataon'ny mponin'i Estancia hahazoany rariny sy ny fandraisana an-tanan'izy ireo hanome fanampiana ireo niharam-boinan'ny rivodoza sy ny fiparitahan'ny solika, dia voarakitra an-tahirin-kevitra ao amin'ny tetikasa Voices of Hope , nahazo vatsy 2014 tamin'ny Rising Voices.
Ma. Alejane Carbajosa, mpanolo-tena iray ao amin'ny Voices of Hope, nandahatra ny fitakian'ny mponin'i Estancia hahazo rariny nandritra ny tsingerintaona voalohany nandalovan'i Haiyan:
Mbola miantso vonjy ny Estanciahanons. Mbola misokitra ny rariny ireo niharam-boinan'ny solika fandrehitra. Saingy jamba sy marenina ary tsy manana fo antra ny governemata raha momba ny fihetseham-pon'ny vahoakany. Ahoana ny fomba amelan'ny governemanta ny vahoakany hiaritra fangirifiriana sy fialan'aina?
Ho fanampiana ny mponina hahazaka ny takaitra, dia hetsika maro no nomanina toy ny atrikasan-tantara tsangana sy iraka ara-pitsaboana maromaro. Nisy ‘dia ho an'ny rariny’ nahavory olona mihoatra ny 5.000 tamin'ny Novambra 2014 ary niantso ny governemanta hanatontosa ny fanomezana antoka hanome fanampiana sy fanohanana ara-bola ho an'ny mponin'i Estancia. Nandrakitra ireny hetsika ireny ny Voices of Hope, ary ao anatin'izany ihany koa ny ezaka fiomanana hiatrika ny voina natombok'ireo fikambanana ao an-tanàna.
Nandritra ny ‘dia ho amin'ny rariny’, nitondra sora-baventy mivaky hoe ‘mitsangana ho amin'ny fiainana feno fanambinana’.
Iraka ara-pitsaboana ao Estancia. Saripika avy amin'ny pejy Facebook Nona Prieto.
Tahotra ny tadio matanjaka tahaka an'i Haiyan hoavy, miangona ao amin'ny sekoly iray navadika vonjimaika ho toera-pisindana ny mponina.
Mponina nentina any amin'ny toera-pisindana ho fiomanana amin'ny rivodoza ho avvy.
Firotsahan'ny Fokonolona mpanolo-tena manatontosa hetsika ara-kolontsaina, miady hevitra momba ny fikorontanan'ny toetr'andro, sy fotoana famahanana.
Mbola miaritra ny fanaovan'ny governemanta tsinontsinona azy i Estancia ary adinon'ny governemanta tanteraka ny nanadio ny solika niparitaka nanodidina ny tanàna. Saingy noporofoin'ny mponina fa na dia miada-panolorana fanampiana aza ny governemanta, dia afa-mivondrona sy manetsika ireo fanampiana avy any amin'ny hafa.
Ny sary eto ambany dia maneho amin'ny marika hita maso ny tolona ataon'ny mponin'i Estancia: Ny firaisankina dia avana manome aingam-panahy ny olona handresy ny voina izay mandrahona ny fiainan'izy ireo.
Raha tsy nolazaina manokana, ny sary rehetra dia avy amin'ny Voices of Hope